လက်ကား ပန်းရောင် Acrylic Mirror Sheet (0.6mm-10mm) ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူ |ရိုးသားဖြူစင်သည်။
ပန်းရောင် Acrylic Mirror Sheet (0.6mm-10mm)
Acrylic mirror panels များသည် ရိုးရာမှန်မှန်များထက် ပေါ့ပါးသော၊ လိုက်လျောညီထွေရှိသော၊ အကွဲအပြဲဒဏ်ခံနိုင်သော အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။အသုံးများသောအသုံးပြုမှုများတွင် ဝယ်ယူသည့်နေရာ၊ လုံခြုံရေး၊ နှင့် အလှကုန်၊ ရေကြောင်းနှင့် မော်တော်ယာဥ်ဆိုင်ရာ အပလီကေးရှင်းများ ပါဝင်သည်။ ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု စွမ်းအားသည် 10 ဆ ပိုကြီးသည်၊ ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ ကွဲအက်မှုဒဏ်ခံနိုင်ပြီး သမားရိုးကျမှန်များထက် အထူအပါးပို၍ ဘေးကင်းပါသည်။
ထူးခြားသော ခိုင်ခံ့သော ပန်းချီနှင့် အပေါ်ယံပိုင်း
အဆိပ်မရှိသော၊ eco friendly
ပါးလွှာသော acrylic မှန်ချပ်၏ဝိသေသသည်ပိုမိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပြီး၊ များစွာသောအနုပညာလက်ရာများ၊ ကလေးကစားစရာများပေါ်တွင်တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။နှင့် 1mm ပါးလွှာသော acrylic မှန်တစ်ချပ်သည် ကျောဘက်ရှိ ကော်ကို self adhesive acrylic မှန်အဖြစ် မကြာခဏ ဖုံးအုပ်ထားသည်။ထို့နောက် ၎င်းတို့သည် အရုပ်များကို အလွယ်တကူ အသုံးချနိုင်သည်။ပါးလွှာသော acrylic မှန်ချပ်သည် ပျော့ပျောင်းသောကြောင့် ပုံသဏ္ဍာန်ထွက်ရလွယ်ကူပြီး ရောင်ပြန်ပုံရိပ်များကို ပုံသဏ္ဍာန်အပြင်သို့ဖြစ်စေသည်။ဤပြဿနာကိုရှောင်ရှားရန် ပါးလွှာသော acrylic မှန်တစ်ချပ်သည် ချောမွေ့ပြီး မာကျောသောမျက်နှာပြင်တွင် ကပ်ထားရန် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ အရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္ဍာန်များနှင့် အရောင်များရရှိနိုင်သည်၊ ဤတာရှည်ခံပစ္စည်းသည် slat walls၊ point of purchase displays များအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ကုသိုလ်ကံ မီးခိုးရောင် Acrylic မှန်ချပ်
နမူနာအရွယ်အစား A4 အရွယ်အစား
စက်အဖုံးများ၊ လျှပ်စစ်အကြေးခွံများ၊ လျှပ်ကာပစ္စည်း
1. Acrylic မှန်ကို ထိုနေ့တွင် သုံးနိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ acrylic mirrors တွေဟာ ဘေးကင်းပြီး ကွဲအက်မှုမရှိတဲ့အပြင် မှန်လို တစ်ဝက်လောက်လင်းပါတယ်။
2. သင်က စက်ရုံလား။
အဖြေ: ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် တရုတ်နိုင်ငံ၊ Huizhou တွင် တည်ရှိပြီး ဧရိယာ 15000 စတုရန်းမီတာ ကျယ်ဝန်းကာ ထုတ်လုပ်မှု အတွေ့အကြုံ 18 နှစ်ရှိပြီး acrylic ပန်းကန်နှင့် ပလပ်စတစ်ကြေးမုံများ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
3. မင်းရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကို ဘယ်လိုထုပ်ပိုးမလဲ။
A: ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို ခိုင်ခံ့ပြီး အစိုင်အခဲဖြစ်သော ပို့ကုန်သစ်သားအိတ်များတွင် ထုပ်ပိုးထားပါသည်။ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အရ ထုပ်ပိုးမှုကိုလည်း စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
ယခင်- အနီရောင် Acrylic Mirror Sheet (0.6mm-10mm)
နောက်တစ်ခု: မီးခိုးရောင် Acrylic Mirror Sheet (0.6mm-10mm)
အပြာရောင် Acrylic Mirror Sheet (0.6mm-10mm)
ခရမ်းရောင် Acrylic Mirror Sheet (0.6mm-10mm)